Nayakhabar.com: मेरो राजनीतिक मृत्युको घोषणा गर्छु:गगन थापा
मेरो राजनीतिक मृत्युको घोषणा गर्छु:गगन थापा
राजनीतिले समाजका सबै पक्षलाई प्रभावित गरेजस्तै समाजले पनि राजनीतिलाई प्रभावित गरेका हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्र एउटा मात्र हुँदैन। समग्र नेपालको नेतृत्व भनेर एउटा व्यक्ति वा समयको मात्र आलोचन गर्न सकिँदैन। हामीले विजयलाई स्थायित्व गर्न सकेका छैनौँ। जीत्न जान्ने तर जीतलाई स्थायित्व दिन सक्ने सामूहिक नेतृत्व आउन सकेन। यो सामूहिक असफलताका लागि हामी सबै दोषी छौं।
नेतृत्व याचना गरेर होइन दाबी र खोसेर ल्याउने हो। केही दिन कुर्नुहोस खोसेर लिन्छौं। खोसेर लिँदा आनन्द अनुभव हुन्छ। केही दिन कुर्नुहोस। नागरिकले दलको नेतृत्व यस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राखे पनि यो पार्टीको सदस्यको नियन्त्रणमा रहेका दल हुन न कि नागरिकको नियन्त्रणमा होस्। अहिलेको दलको चरित्र भत्काएर नागरिकसँगको सम्बन्ध स्थापित नगरेसम्म यो पूरा हुन सक्दैन।
हामी गहिराईमा नपुगी व्यक्तिको आचरणमात्रै हेरी निर्णय गर्छौं। चमत्कारिक व्यक्ति मात्रै खोज्छौं। हामी सबै विषयको हल गर्न सिंगो दलको संरचना कसरी बनेको विषयमा ध्यान दिन सक्दैनौं। पेटन र क्लाइटको सम्बन्ध नभत्काइ हुँदैन।
व्यक्तिको आफ्नो नैतिक आचरण र चरित्रको सीमा हुन्छ। त्यो भित्र रहेर मात्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। नेपालको दलका सदस्य बन्ने संरचना नभत्काई एकैचोटी कहि पनि परिवर्तन आउँदैन।
राजनीतिक प्रणालीले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने समाजको सापेक्ष ज्ञानमा भर पर्छ। शासकीय स्वरुप बदलिएको भए त्यो बुझाइ ठिक ठान्थेँ। तर, अहिलेको पद्धति मिलेर खाने प्रणाली हो। यो कहिले यता कहिले उता हुन्छ, अगाडि बढ्दैन।
लिलामणीजीको नैतिक बल र क्षमता उच्च छ तर उहाँ मुख्यसचिव भएर काम गर्दा यति परिवर्तन भयो भन्ने ठाँउ छैन। हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको संरचना नफेरी लिलामणीजीबाट मात्रै धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन। हामीले संविधान बनाउँदा शासकीय स्वरुप बदल्न सकेएको भए आधारभूत रुपमा केही परिवर्तन हुने थियो। तर मिलेर खाने शासकीय प्रवृत्ति बनेको छ अहिले।
नयाँ शक्ति भनिरहनु भएको छ बाबुरामजीहरु। पार्टी नयाँ खोल्न पाइन्छ तर शक्ति हुन त जनमतले वैधानिकता दिनुपर्ने हुन्छ। नयाँ बन्न लागेको पार्टीलाई नयाँ शक्ति भन्दिने? यो बनेर आउँदा यो नयाँ शक्ति भयो भने सबैलाई थ्रेट होला। तर कसैले दाबी गर्दैमा सबैले नयाँ शक्ति भन्न मिल्दैन।
परिवर्तनका लागि जोखिम लिनु आवश्यक छ। त्यसका लागि सोच, संकल्प, सुझबुझ, साहस हुनुपर्छ। जोखिम लिने स्पेस बनाउन भन्दा त संरचना बदल्नुपर्छ। मैले आफ्नो राजनीतिक मृत्युको घोषणा गरेँ, मेरो अबको १५ वर्षको आयु राजनीतिमा छ। यो जोखिम मैले लिएँ। यो समयभित्र मैले जोखिम लिने हो, बाँकी परिणामले देखाउला।
अहिलेको अवस्थामा सफल हुने नहुने सफलताको मानक के होला? सफल भएमा अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो। अहिलेको स्वार्थ समूहबाट गएर म जस्ताले आफ्नो दलको आधारभूत संरचना भत्काएर नागरिकको दल बनाउने हो।
यो बहसमा मैले के गरेँ म कस्तोभन्दा पनि अहिले सतहमा देखिएका कुरामा मात्रै रह्यौं भने कहिँपनि पुग्न सकिँदैन। हाम्रो भूमिकामा हाम्रो सीमा के छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। हामी सबै कुरामा नया ढंगले प्रश्नको समाधान खोज्नु पर्छ। किसुनजीले एक पटक अर्न्तवार्तामा म रक्सी खानका लागि सांसद हुन खोजेको भनेका थिए। त्यतिबेला दोष किसुनजीको होइन।
पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलुमा नेतृत्वको संकट शीर्षकमा भएको बहसमा गगन थापाले दिएको अभिव्यक्ति